मेरा लागि ‘संगीत सम्राट्’- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
मेरा लागि ‘संगीत सम्राट्’
जेष्ठ २६, २०७५ कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौँ — आधुनिक नेपाली संगीतका प्रणेता एवं नेपालको राष्ट्रगानका संगीतकार अम्बर गुरुङको निधन भएको दोस्रो स्मृति दिवस जेठ २५ (शुक्रबार) परेको छ । नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका संस्थापक कुलपतिसमेत रहेका गुरुङको सम्मानमा प्रतिष्ठानले यो साता मात्रै झन्डै ६ सय पृष्ठको स्मृति ग्रन्थ प्रकाशित गरेको छ ।
आधुनिक नेपाली संगीत प्रणेता अम्बर गुरुङ अस्तहीन नाम हुन् । श्रीशारदा माताका आशीर्वाद–स्नेहका परिणाम हुन्, आफ्नै नीति–निर्धारणका सफल उद्यम हुन् । नेपाली संगीत–बारीमा भनेजस्तो मलपानी नपुगेको अवस्थाबाट संगीत–यात्राका संघर्ष गर्दै अम्बर उदाएका थिए । युगले खोजेको सिर्जनाका लागि आँसु–पसिना–रगत अर्पेर नितान्त नौला–नौला प्रयोगात्मक कलाको निर्माण गर्दै संगीतप्रेमी हृदयमा बास पाउन सफल पूजनीय प्रतिभा हुन् अम्बर ।
२०७२ जेठ २५ । बिहान २ बजेर ३५ मिनेटमा अम्बरको जीवनयात्रा टुङ्गिएको असह्य दु:खद सन्देश फैलियो— व्यक्ति–व्यक्ति, घर–घर, गाउँबस्ती, सहरभरि अनि अम्बर व्याप्त अनन्त अम्बरभरि । एकक्षण सबै स्तब्ध भए, कति जनाले त ‘साँच्चै हो के ?’ भन्ने प्रश्न पनि उठाए । कुरा साँचो थियो, ईश्वरले आफ्ना बहुमूल्य रत्न आफ्ना काखमा उठाए ।
घटनाको दोस्रो बिहान टोरेन्टोबाट फोनबाट प्रश्न आउन थाले, ‘तपाईंले उहाँका कनु–कुन गीत गाउनुभयो ?’
त्यसरी नै स्थानीय च्यानल र पत्रकारहरूले धेरै प्रश्नहरू उठाइरहे, सोधनीको क्रम केही दिनसम्म चलिरह्यो । उत्तरमा मैले जानेजति कुरा सबैलाई भन्दै गएँ ।
गत पाँच दशकदेखिभन्दा बढी नेपाल भूमिलाई आफ्नो ठानेर अम्बर त्यहीं बाँचे, त्यहींको माटो सुहाउँदिला गीत रचना गरे, गाए, सिकाए, बाटो देखाए, हुँदाहुँदा त्यहींको राष्ट्रिय गीतको धून पनि बनाए, राष्ट्रियता चिनाए अनि राष्ट्रिय सम्मानसित शवयात्राको सहभागी भए । नेपाल राष्ट्रका अनमोल धन भएर पनि उनका यात्रान्तमा दार्जिलिङ किन रोयो ? किन घाइते भयो ? गाउँ–गाउँ, बस्ती, चियाबारी, समाज, संघ, संस्थानले शोकसभाको आयोजना किन गरे ? उनी हृदयले नेपाली थिए, विवेकले जातिभक्त थिए । जता बसे पनि जातिका सोचनीय अवस्थामा उनी रोए, संसारभरिका नेपाली सन्तानका भक्त थिए । यसैले यसो भन्दा हुन्छ, ‘गायक, शब्दकार, संगीतकार अम्बर गुरुङ हिजोसम्म नेपालभित्र थिए, आज प्रत्येक नेपालीको हृदयभित्र छन् ।’
नेपाली संगीतको जन्म चालीसको दशकदेखि नै भएको हुनाले संगीत–संसारका अग्रजहरूका महत्त्वपूर्ण मार्गनिर्देशनकै परिणामस्वरूप पछिका पुस्ताहरूलाई ठूलो उपलब्धि भयो । अनि, हामी पछि आउनेका लागि उनीहरू साँच्चै सम्माननीय छन्, रहनेछन् । भाग्सु, देहरादून, नेपाल, दार्जिलिङका त्यस समयका गीतहरू आकाशवाणी दिल्ली, रेडियो नेपाल आदिबाट गुञ्जायमान नभएका होइनन् । यिनै प्राप्तिकै फलस्वरूप हामीलाई नेपाली गीत गाउने रहर जाग्यो र गाउन थालियो । त्यसरी नै अनेपाली भाषामा सुनिने गीतहरू पनि हाम्रा प्रेरणाका स्रोत थिए । तर, हाम्रा गीत र गायनमा मौलिकताको अभाव अनुभव गरियो । यस्तै क्रममा सन् १९५७ तिर कवि अगमसिंह गिरीले अरूका पीडा आफ्नै सम्झेर असह्य हुँदै हिँडिरहेका बेलामा नै विशेष गरेर ‘नौ लाख तारा उदाए...’ नामक गीतको जन्म भयो । कवि गिरीका सहकर्मी, सहपाठी, शुभचिन्तक उनैका कर्मथलो भानुभक्त बुनियादी पाठशाला (दार्जिलिङ) भेला हुने गर्थे । गलबन्दी पहिरिएर भेलाकक्षमा प्रवेश गरेका कवि गिरीले गोजीबाट एउटा सशक्त भाव पक्षले सुुसज्जित एउटा पन्ना दिए गायक–संगीतकार अम्बर गुरुङलाई । यसलाई संसारैभरिका नेपाली जनजीवनको क्रन्दनमाथि गीतकारका सशक्त भावनाले सजिएको अत्यन्त शक्तिशाली गीत मात्र नमानेर पहिलो नेपाली मौलिक गीत मानिन्छ । यसो भन्दा हुन्छ— ‘नौ लाख तारा उदाए...’ नै गायक–संगीतकार अम्बरका परिश्रम–प्रतिभाको प्रथम सफल निर्माण हो । यो गीतले गायक, संगीतकार अनि गीतकारलाई अमर बनाएको कुरा पनि सत्य मान्नुपर्छ । सांगीतिक यात्राको पहिलो सफल रचना अनि गायनको गाम्भीर्य यसै गीतबाट भयो । यति ठूलो उपलब्धिपछि गायक–संगीतकारले कुनै पनि परिस्थितिमा पछि फर्केर हेरेनन्, बरु अझै उचाइ खोज्दै गए, जातीय अस्तित्वसित सम्बन्धित यस गीतबारे धेरै जना विद्वान्–विचारकले आ–आफ्ना मत प्रकट गरेका छन् ।
‘ए कान्छा मलाई सुनको तारा खसाई देऊ न...’ पनि यस्तै अर्को नेपाली भाकाको मौलिक गीत दार्जिलिङे गीत हो । गायिका अरुणा लामा अनि गायक रुद्र गुरुङले खुबै मिठास भरेर गाएका छन् ।
दार्जिलिङमा पश्चिमबंगाल सरकारले लोक मनोरञ्जन शाखा नामक सांस्कृतिक विभागको स्थापना गर्दा म पनि गायिकाका रूपमा मनोनीत भएर अम्बरकै मार्गनिर्दशनमा काम गर्न थालें । उनले लोकलयमा आधारित गीत अनि लोकनृत्य लिएर विभिन्न चियाबारी बस्तीमा संघर्षरत जीवन बिताइरहेका जनजीवनलाई मनोरञ्जन दिन कार्यक्रम प्रस्तुत गरिन्थ्यो, चियाबारी–बस्तीका मानिसहरू साँच्चै रमाइलो मान्थे । अनि, ‘नौ लाख तारा उदाए...’ गीत गाउने कलाकार को होलान् (?) भनेर हेर्नकै लागि पनि बूढाबूढीहरू लौरो टेकेर आउँथे ।
हो, संगीतको सीमा छैन तर एउटा मान्छेले आफ्नो सारा जीवन संगीत सेवामा लागेर माया गरे । त्यो एउटा पराकाष्ठा नै हो । उनी संगीतका लागि जन्मे, त्यसैमा बाँचे अनि संगीतसितै बिलाए । प्रत्येक क्षण संगीतकै लागि समर्पण गरे ।
नेपाल नरेश मविवि शाह आफैं एक जना सशक्त कवि, गीतकार र संगीतप्रेमी हुनाले दार्जिलिङ भ्रमणमा आउँदा ऐतिहासिक महत्त्व भरिएको ‘नौ लाख तारा...’ सुन्नुभयो । यस्तो स्तरीय गीतमाथि सरकारी प्रतिबन्ध लाग्दा दार्जिलिङ इलाकालगायत नेपालका संगीतप्रेमीलाई पनि आघात पुग्यो र नेपाल नरेशलाई पनि छोयो । उहाँकै निम्तो मनमा उनेर संगीतकार गुरुङ भारत त्यागेर काठमाडौं लागे, सदाको निम्ति ।
लोक मनोरञ्जन शाखामा कार्यरत अवधिमा मैले पनि धेरै गीतसंगीत सुन्दै गएँ, गाउने सुयोग पनि पाएँ । अनि ‘सम्हालेर राख नामक...’ अत्यन्त सफल गीत गाउने भाग्य जुट्यो । आज पनि यस गीतको लाकेप्रियता यथावत् रहेको छ, सचेत वर्गलगायत युवा गायकगायिका पनि यो गीत मन पराउँछन्, गाउँछन् । सन् २०१२ मा आयोजित ‘पलेंटी उत्सव’ (नेपाल) चार दिनसम्म सञ्चालित कार्यक्रममा पहिलो दिन नै संगीतकार अम्बर गुरुङको एकल गायनमा पुराना कालजयी गीतहरू सुन्ने मौका पर्‍यो । गायनमा उनको मिठास त्यत्तिकै थियो । यस्तै स्थितिमा उनले भने, ‘सम्हालेर राख लोकप्रिय बनाइदिनुभएकोमा म सुश्री शान्ति ठटाललाई आन्तरिक हृदयबाट धन्यबाद टक्र्याउँछु ।’
यसो भन्नु आवश्यकजस्तो लागेन, मलाई । तैपनि धन्यवाद पाउँदा खुसी नै लाग्यो । अम्बरका गीतहरूमा कल्पना अनुभूति, सशक्त भावनालगायत अनेक रस पाइन्छन् । प्रत्येक गीतले प्रभाव पार्न सक्ने भाव–भावना, मिलनविछोड, आशानिराशा, विसंगीत र विशेषगरी जातीय भावना आदिले भरिएका, सरलता, माधुर्य आदि गुण छँदैछन् । दार्जिलिङमा रचिएका गीतहरू साँच्चै अद्वितीय छन्, मार्मिक छन्, अविस्मरणीय छन् ।
पहाड सुक्यो जस्तो लाग्छ
बस्ती डुब्यो जस्तो लाग्छ
लड्दछन् पाइलाहरू आँखामा थुरिएर
सुक्दछन् प्यालाहरू ओठमा रित्तिएर
फेरि कली फुलेर
अतीत सँगाली ल्यायो
शब्द र संगीत बेजोड छन् यी गीतमा । यी माथिका यस्ता उपलब्धिलगायत जातीय प्रेममाथि आधारित गीतलाई क्यान्टेटाको रूप दिने पहिलो नेपाली संगीतकार अम्बर गुरुङ ऐतिहासिक घटनाका सफल व्यक्ति हुन् ।
‘सम्हालेर राख...’ को रचना टिङलिङ चियाबारीमा भएको हो । ‘आकाश झुक्यो धरती उठ्यो’ गीत सोरेङमा सुनें, सिक्ने गाउने काम पनि त्यसै गाउँमा हुनाले भन्न सकिन्छ । प्रतिभाशाली कलाकारलाई कलाका लागि विशेष ठाउँ चाहिन्न ।
सन् १९६५ मा कवि मविवि शाहको जन्मदिन मनाउँदा संगीतकार शरण प्रधान, गायिका अरुणा लामा, आइजक, म काठमाडौं जाँदा रेडियोमा ‘सम्हालेर राख...’, ‘मेरो दु:खी मन’ आदि गाएकी थिएँ । तर, ‘सम्हालेर राख’ सबै तहका श्रोताले मन पराए, बुद्धिजीवीले रुचाए, साहित्यकार पारिजात पनि खुसी भइन् । गीतकार बैरागी काइँलाको गीत (मेरो दु:खी मन) संगीतकार अम्बर गुरुङको सुन्दर संगीतले सजिएको छ । मध्यलयमा बाँधिएको यस गीतको शब्द–सुरमा ठहराउँछ । गाउन सक्नेलाई यो गीत गीतै छ र शब्दका भावमा धुनले न्याय गरेको छ, उनका उत्कृष्ट गीतहरूमध्ये यो एउटा गीत हो । सन् १९६४ तिरको उनको अर्काे गीत—
जहिले तिमी आउ बिरानीले सोध्छ
बिरानीमा फुल्ने फूल तिमीलाई खोज्छ ।
यो गीतको पहिलो पंक्तिका शब्दहरू र धुनले मनलाई छुन्छन् र जसले यो गीत मन पराएर सुन्छन्, उनीहरूले यस्तै अनुभव गर्छन् । यसमा कर्ड–प्रोगेसनको प्रयोग पाइन्छ । त्यसै साल आयोजित संगीत प्रतियोगितामा यो गीत प्रस्तुत गर्दा रञ्जित गजमेरले तबला बजाएका थिए । गीत समाप्त हुनेबित्तिकै प्रतियोगिताका लागि संलग्न निर्णायकगण, अतिथिगण अनि कवि अगमसिंह गिरी पनि जुरुक्क उठेर यो गीत फेरि गाउन अनुरोध गरे । दोस्रोचोटि गाउँदा संगीतकार गोपाल योञ्जनले तबला बजाएका थिए । यस गीतको धुन पश्चिमी परिपाटीमा ढालिएको छ, विभिन्न कर्डहरूको प्रयोग गरिएको छ, बेजोड मेलोडी छ । अत्यन्त भावुक र संवेदनशील संगीतकार अम्बर गुरुङको अन्तरात्माबाट प्रस्फुटित यस्ता अनेक गीतहरू छन्, श्रोताको मन सजिलै छुन्छन्, मनैमा गीतहरू गुन्जिरहन्छन् ।
साठीको दशकतिर संगीतकारद्वय कर्म–गोपाल योञ्जनसित एउटा सांस्कृतिक कार्यक्रममा चमर्ची (भोटाङ) जाँदा उच्च ओहोदामा बसेका गुरुङ परिवारसित भेट भएपछि हामीलाई साम्सी (भोटाङ) लगे । संगीतकार लुइस् ब्याङ्क पनि पुगेका रहेछन् । गीत गाउने क्रममा मैले ‘जहिले तिमी आऊ...’ गाएपछि सबैले सराहना गरे । पश्चिमा संगीतका ज्ञाता लुइस् ब्याङ्कले भने, ‘यति मेलोडियस नेपाली गीत मैले पहिले कहिल्यै सुनेको थिइनँ ।’
टर्नबुल उच्च विद्यालयमा अध्ययनरत छात्र गुरुङलाई विद्यालयमा बाइबलबाट टिपिएका प्रार्थना, भजनादिमा सुनिने पाश्चात्य धुनबाट पनि केही प्रभाव ग्रहण गरेर गीतसंगीतमा संलग्न तेजी कलाकारका रूपमा देखा परे । अनि कालन्तरमा पाश्चात्य संगीतकार केही यसै सत्यको आधारमा कति सचेत व्यक्तिले भनेका छन्— संगीतकार अम्बर गुरुङका संगीत रचनामा पाश्चात्य प्रभाव पाइन्छ ।
यति भन्दाभन्दै एउटा निर्विवाद सत्य स्वीकार गर्नुपर्छ— संगीतकार गुरुङले पाश्चात्य प्रभाव प्रयोग गरेका भए तापनि मौलिकता (नेपालीपन) को अभाव भने छैन । यति प्रतिभाशाली व्यक्तिलाई प्रधानाध्यपक महेन्द्र प्रधानले प्रोत्साहन दिनुहुँदै त्यसै विद्यालयको एउटा कोठामा संगीतशिक्षकको भार सुम्पिएको थियो भने कालान्तरमा नेपाल नरेशले नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा संगीतनिर्देशकको भार सुम्पनुभयो । निबन्धकार शंकर लामिछाने, कवि भूपि शेरचन आदि अभिन्न मित्र भए । उनका गीत, संगीत र गायनविरुद्व एक शब्द पनि सुन्न नचाहने कवि विचन्द्र प्रधानले यसो भनेका छन्, ‘अम्बरका गीत, संगीत र गायनमा के भन्नेहरू पनि छन् । म भन्छु, अम्बरका गीत, संगीत र गायनमा एउटा छुट्टै मात छ । त्यो मातले दिन बितेको थाहा हुन्न, रात बितेको पत्तो हुँदैन ।’
उनीसित आत्मीय सम्बन्धले बाँधिएका वरिष्ठ साहित्य निर्माता डा. इन्द्रबहादुर राईले १६ जुन २०१९ मा स्थानीय च्यानलबाट गायक, शब्दकार, संगीतकार गुरुङलाई हलुका गीतहरूदेखि माथि उठ्ने प्रेरणा दिनुभएको रहेछ । ‘म लडी–लडी उठें/म उठी–उठी लडें’ सुन्नुभएपछि यस्तो हलुका होइन, गहकिला गीतसंगीत निर्माण गर्ने सुझाउ दिनुभयो तर यस गीतका शब्दहरूले छर्लंग पारेको छ— गीतकारको अन्तरव्यथा ।
लोकलय आधारित होस् वा राग आधारित होस्, उनका पाश्चात्य शैलीको प्रयोग होस्् शब्द, धुन र स्वरको सफल र सशक्त सन्तुलन पाइन्छ । कवि गिरीबाट जातीय भावनाका प्रभाव–प्रेरणा ग्रहण गरेर संगीतकार गुरुङले धेरै गीत रचेका छन् भन्ने कुरा डा. जगत छेत्रीले अम्बरका गीतसंग्रह ‘सम्हालेर राख’ मा अभिव्यक्त गरेका छन् ।
अर्काे पक्ष भीडभित्र आफूलाई एक्लो पाउने गरेका कुरा यसरी प्रकट गरेका छन् : वेदना विरह पोखेका छन् । अर्को पक्ष– भीडभित्र आफूलाई सधैँ एक्लो पाउने गरेका कुरा यसरी प्रकट गरेका छन्, वेदना–विरह पोखेका छन्—
कहाँ जानु मैले बाटो कहीं छैन
एक्लो बिरानोमा साथी कोही छैन ।
आडम्बर, गरिबी, जातिप्रेम, बाध्यता, विवशता आदि पनि सफलतापूर्वक शब्द, संगीत दिने प्रवृत्ति केलाउँदा उनी कतै बिरलै प्रकृतिका कलाकार प्रतीत हुन्छन् । तल टिपिएका गीतांश यस्ता छन् :
एकदमै बिस्र्याे जस्तो लाग्छ ।
गीतकार अम्बर गुरुङका शब्दमा सायदै कसैले संगीत भरेका होलान्, मैले सुनेकी छैन । होला कतै, थाहा छैन । तर, मैले उनका गीतमा संगीत भर्ने भाग्य पाएकी छु । सन् १९६५ को सुरुमा स्व. शेखर दीक्षित, इन्द्रकुमार गजमेर अनि म गीतसंगीतकै कुरामा संलग्न हुँदा गीतकार अम्बर गुरुङले एउटा गीतमा धुन भर्ने मौका दिए, गीत हेरें, आँट आएन । तैपनि घरमा यसो धुन मिलाउने कोसिसको परिणाम मीठो धुन तयार भयो, दार्जिलिङको क्यापिटल हलमा आयोजित एक कार्यक्रम (सन् १९६५) मा यो प्रस्तुत गर्न पाएँ । त्यो गीत हो—
म अचानक नै अढें
फूल पनि तर्सिदियो
पछि हेरें भूल थियो
भूल पनि झर्किदियो
पछि अम्बर नेपाल प्रवेश गरेपछि दैनिक जीवनमा देखापरेका, सहनुपरेका, रुनुपरेका स्थितिहरू होलान् । जन्मथलो दार्जिलिङ छोड्नुपरेको दु:खले होला अति मार्मिक गीत तयार गरेका छन्—
म दूर भएर के भो
अभिशाप छाएर के भो
यति खोज्छु सम्झनालाई
कि बिर्सिसकेर के भो ।
नेपाली संगीत कलाको विकास अनि विस्तारका लागि आफ्नो जीवन नै अर्पण गर्ने शब्दकार, संगीतकार स्वरका धनी अम्बर गुरुङले निरन्तरता दिइरहे–दिई नै रहे । उनका निरन्तर संगीत रचनाले नेपाली संगीतको गरिमा, महिमा, मूल्य, विकास र विस्तारका लागि पुर्‍याइएका योगदानप्रति शब्दद्वारा न्यायोचित मूल्यांकन गर्न सकिँदैन । संगीत अथाह जलनिधिजस्तै अनन्त संसार हो, सागरको नापतौल गर्न नसकेझैं संगीतकलामा कुनै संगीतकार पारंगत भएको सायदै पाइँदैन । संसारका कुनै त्यस्ता कलाकार होलान् तर सायदै होलान् ।
यति विशाल–विस्तृत क्षेत्रमा हाम्रा गायक, शब्दकार, संगीतकार अम्बर गुरुङले आफ्ना कलात्मक प्रयोग–प्रेम–प्रस्तुतिद्वारा जे जति जस्ता थरीका योगदान दिए, दिएर गए, शरीरबाट गएर नेपाली हृदयमा बसे, तिनका लागि मात्र होइन, नेपाली संगीतका अलंकार–अस्तित्वको परिचय अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा विस्तार गर्न सफल भए । यसैले भारत, नेपाल अनि विदेशमा पनि सम्मान पाए । व्यक्तिगत सम्मानद्वारा नेपाली संगीत संसार नै सम्मानित गराए, नेपाली कलाकार सबैलाई सम्मानित गराएर गौरवशाली इतिहास सुनौलो अक्षरमा लेखाए । नेपाली हृदय, नेपाली संगीत र नेपाली माटोले कहिल्यै नभुल्ने अम्बर भए, अमर भए ।
प्रकाशित : जेष्ठ २६, २०७५ ०८:५१
हङकङमा पनि त्यस्तो !
आमन्त्रित होस् वा आयातित, पाहुनापासाको अभिनन्दनमा हङकङ लास्टै मनकारी र विख्यात छ । यसपाला गएँ, देखेँ, भोगेँ र चाल पाएँ ।
मेरो हङकङ म्युजियम घुमाइमा एउटा अद्भुत रहस्य घटित भयो । भयो के भने, नित्सेले बध गरेको ईश्वरको प्रेतले रहस्यमय ढंगले मेरो पिछा गर्‍यो ।
जेष्ठ २६, २०७५ खगेन्द्र संग्रौला
काठमाडौँ — हङकङ यात्राको निम्तो विरलाकोटी हो भन्ठानेर म त्यसैत्यसै मखलेल भएको थिएँ, गाँठ्ठी कुरो बुझ्दा त्यो रहेछ सनातनी र सरदर दर्जाको । मेरो फुक्र्याइँ र अभिमानको पारो ह्वात्तै झर्‍यो र म सरदर मनोदशामा उत्रिएँ । आठ–दस वर्षयता हङकङ जानेहरू त गाँठ्ठे, सानोतिनो जुलुससरह भइसके छन् ।
साहित्य–सङ्गीतप्रेम र अतिथिप्रेम हङकङवासी नेपालीहरूको स्वभावकै अभिन्न अङ्ग रहेछ । त्यसैले त लाग्दो हो हङकङ जानेहरूको यत्रो लर्को । त्यहाँ कोही आदरपूर्वक डाकिएर जाँदा रहेछन्, कोही जाँदा रहेछन् ङिच्च हाँस्दै डाकिमागेर । त्यहाँ जानेहरू रहेछन् कवि र लेखक, गायक र सिनेकर्मी, रङ्गकर्मी र राजनीतिकर्मी, फकिर र हरिपहरू । जानेहरू जो हुन् ती कोही हङकङवासी नेपालीहरूलाई हँसाएर फर्किंदा रहेछन्, कोही फर्किंदा रहेछन् तिनलाई हाँसो र आँसुको दोसाँधमा अल्झाएर, अनि कोहीचाहिँ हात पसारेर, नाक काटेर, तिनलाई रुवाएर । निम्ताको दर्जा सरदर भएर के भो, म सानले हङकङ गएँ, आनन्दित हुँदै हङकङ डुलेँ र थकित देह बोकेर सुमुसुमु आफ्नो न्यानो गुँडतिर फर्केँ ।
आमन्त्रित होस् वा आयातित, पाहुनापासाको अभिनन्दनमा हङकङ लास्टै मनकारी र विख्यात छ । गएँ, देखेँ, भोगेँ र चाल पाएँ । दशीनीय स्थलमा डुलाउनलाई ज्यानको समीपमा सहृदयी गाइड हाजिर छन्, ठाउँठाउँमा अभिनन्दनको इन्तजाम हुन्छ । अक्सर त्यो छापामार शैलीमा हुन्छ । कहाँ, कसले, कुन बेला, कसरी अभिनन्दन गर्ने हो, गरेपछि नै थाहा हुने । मलाई पहिलो अभिनन्दन पान्थरे हङकङ समाजले गर्‍यो । त्योचाहिँ पहिल्यै गर्छौं भनेरै गरिएको थियो । साँझको याम, सानो नेपाली रेस्टुरेन्ट, पन्ध्र–बीस जना मानिस, प्रेममय वातावरण । एक माला, अनेक खादा, उदार महिमा गान र झम्के खानपान— स्वदेशमा होस् वा विदेशमा अभिनन्दनको खाँट्टी बान्की यही त हो । हङकङ यसमा अपवाद भएन ।
अभिनन्दनको भावुकता र अनुरागले भरिपूर्ण भाषा बडो भुवामय थियो । त्यो सनातनी संस्कारको लयमा मायालु मुखहरूबाट प्रकट भयो, हङकङको आकाशमाथि उठ्यो र पलभरमै कतै शून्यमा अलप भयो । आखिर त्यसमा थियो के ? त्यसमा के मात्रै थिएन ब्रो ? तिमी हाम्रो भेगका जाज्वल्यमान गहना । तिमी हाम्रो माटोका सुगन्ध । तिमी हाम्रो जीवन–वागका सुन्दर फूल । तिमी हाम्रा चिनारी चिन्ह । तिमी दुर्लभ, तिमी विरल, तिमी हाम्रो सान, तिमी हाम्रो गौरव ! र नै तिमीलाई हाम्रा कोटीकोटी अनिभन्दन ! हङकङमा पनि अभिनन्दनको भाषा र भाका अन्यत्रको जस्तै । गुलाफी, मधुमय र रसभरी चमचम । यो सब धेरै गाढा रंग लेपन नगरी नितान्त चल्तीको जनबोलीमा भनिएको थियो । तर, भनिएको भावको चुरो कुरोचाहिँ यही थियो— तिमी हाम्रा अप्रतिम अलंकार...
अभिनन्दनमा एउटा कौतुकमय वस्तु दृष्टिगोचर भयो । त्यो थियो त्यस्तै अढाई इन्च लामो रातो खाम । हङकङ पर्‍यो तिब्बतजस्तै महाचीन अन्तर्गतको ‘स्वायत्त’ क्षेत्र । त्यसैले त्यो रातो खाम समाजवादको नक्कली प्वाँख जडिएको ‘लाल’ चीनको प्रतीक पो हो कि ! आयोजकले खाममा बडो मूल्यवान् वस्तु छझैँ गरी सुटुक्क मेरो रातो झोलामा हालिदिए । मलाई कुन बेला खाम खोलूँ र हेरूँको व्यग्र खुल्दुलीले गाँजेर ल्यायो । तर के लाग्छ, हाम्रोमा दाताका मुखेन्जी त्यो हेर्नै नमिल्ने । हेरे हेरकको नैतिक नाक ठुन्किने । खुला पश्चिममा खोल खोलेर दाताकै मुखेन्जी उपहार हेर्ने हक्की चलन छ । बन्द हाम्रोमा त्यो छैन । त्यसरी हतपत हेरे हाम्रोमा लोभी–लालचीमा गनिइन्छ । त्यसैले खोलबन्दी दक्षिना होस् वा अन्य कुनै उपहार, हाम्रोमा त्यो कि त चर्पीमा लुकेर हेरिन्छ कि हेरिन्छ घर गएर ढोका थुनेर । मैले होटल फर्केर हेरेँ । रातो खाममा त केही हङकङ डलरको कोसेली पो रहेछ बा ! के गरेको होला यो ? म तीन छक् परेँ । कारण खोज्दै पछि तर्क गरेँ— यो जनजातीय उदारता र हक्की संस्कृतिको द्योतक हुनुपर्छ । बाहुन–क्षत्री समाजमा यस्तो हुँदैन । घरबेटीले दिन मन गर्दैन, अझ भनूँ दिन आँट गर्दैन । डर लाग्छ, कतै अतिथिले सम्मानको सट्टा यसलाई अपमान ठान्यो भने ?! निजले आफूलाई भिखारीको दर्जामा गिराइयो भन्ठान्यो भने ?!
सोधखोज गर्दै जाँदा उपहारको उद्भव थाहा भयो— रातो खामको नखत त चिनियाँ प्रचलनको नवीन नेपाली संस्करण पो रहेछ ।
अब अमिट सम्झनाको पत्रमा अभिनन्दनको रोमाञ्चक कथा अंकित गरेर म समुद्र किनारतिर डोर्‍याइन्छु । आज मेरा गाइड छन् नन्दलाल ठोकर । बडो मजाका मास्टर । समुद्र उति ठूलो छैन । वास्तवमा त्यो त दक्षिण चीन सागरको एउटा सोतो मात्र हो । त्यहाँ हेर्नलाई धेरै कुरा छैनन् । समुद्र नामक त्यही सानो मन्द गतिको जलपुञ्ज छ । माथि उठाइएको किनारमा दर्शनार्थीहरू बस्ने चौतारी र सिँढीहरू छन् । र, सेरोफेरोमा छन् एकअर्कालाई छुनछुन खोज्दै उठेका गगनचुम्बी अट्टालिकाहरू । तिनको त्यो खचाखच कन्तबिजोक देख्दा मलाई त्यसैत्यसै अत्यास लागेर आउँछ । तिनमा बस्ने मानिसहरू त्यो बन्दीखानामा निसास्सिएर किन नमर्दा हुन् ? अट्टालिकाहरूका बीचमा चैनले सास फेर्न पुग्ने स्पेस नभएको
किन हो ?
‘किन’ को उत्तरमा ठोकरबाबु भन्छन्— दाइ, ठाउँ भए पो ! र, ठाउँको अल्पतामाथि उनी प्रकाश पार्छन् । हङकङका सबै झुरुम्म सहरहरू समुद्र पुरेर बनाइएका हुन् । कतिकति परदेखि कतिकति समय लगाएर पानीजहाजमा कतिकति खेप ढुंगामाटो ओसारेर । बाफ रे ! ढुवानी खर्चका हिसाबले सुन जत्तिकै महँगो ढुंगामाटोले समुद्र सुकाएर । अनि सहर कोचाकोच किन नहोस् ? एक पटक समुद्र पुरेर सहर बनायो । सातदस वर्ष जेनतेन चल्छ । अनि मान्छे बढेर कहाँ बसूँ, कहाँ खाऊँ, कहाँ सुतूँको फिक्री हुन्छ । अनि फेरि सुरु हुन्छ समुद्र पुर्ने उही अत्यधिक महँगो उपक्रम ।
हामी समुद्र नजर गर्दै किनारको एक चौतारीमा बसेका छौँ । रमितेहरू आउने आउँदा छन्, जाने जाँदा छन् । मान्छेको गोलो यति बाक्लो छ कि झलक्क हेर्दैमा सासै थुनिएला कि जस्तो लाग्छ । मेरो वरिपरि मान्छे छन् त्यतिका् तर बात मार्नलाई ठोकर सरबाहेक मेरो कोही छैन । भाषा मिले पो ! म त बरा हाँसको विशाल बथानबीच एक अर्घेलो बकुल्लोजस्तो ! त्यत्रो भद्रगोल कुँडुलोमा कोही त धेरथोर अंग्रेजी जान्दा हुन् । तर, थाहा पाउने कसरी ? एकएकलाई सोध्दै हिँड्न नसकिने ! मलाई मानिसहरूको त्यो मारामार भीडमा नितान्त एक्लोपनको सन्तापमय अनुभूति हुन्छ । अगाडि समुद्रमा खेलौना टाइपका ससाना सेता जहाजहरू हाँसझैँ हल्लिँदै यताउति तैरिन्छन् । तिनलाई कुनै हतार छैन, मानौँ तिनलाई कतै जानु छैन । कुनैमा चालक मात्र छन् । कुनैमा अरू एकाध मानिस पनि छन् । सायद ती जहाजका विलासजीवी मालिकहरू होलान् । केवल एकाध जहाजमा आनन्दमग्न पर्यटकहरू देखिन्छन् । यत्तिकैमा एउटा निकै बूढो पुस्ताको रूप न रंगको ढ्याके जहाज मस्तुलमा झन्डा फहराउँदै उही हाँसको चालले हाम्रा नाकै अगाडि आएर टक्क अडिन्छ । ठोकर सर त्यस ढ्याकेलाई तस्बिरमा कैद गर्दै मेरो तस्बिर खिचिदिन्छन् । र, अब हामी आफ्नो बाटो तताउँछौँ ।
दृश्य परिवर्तन हुन्छ र दोस्रो अभिनन्दन मञ्चन हुन्छ । त्यसको आयोजन हो, भोजपुरे हङकङ समाजको । अभिनन्दन गरिने पात्र उत्तरकुमार खत्री र दिनेश घिमिरे । दुवै जना भोजपुरे । दुवै जना नेपाल सरकारका उम्दा सहसचिव । दुवै जना महावाणिज्य दूतको निम्तामा देश हेर्न र मुख फेर्न हङकङ आएका । तै तै यी बूढालाई पनि भिराइदिउँm न एकाध खादा भनेर होला, उदारामना आयोजक मलाई पनि निम्त्याउँछन् । भैपरिआएको अभिनन्दन ग्रहण गरेर थकित ज्यानलाई विश्राम दिन म होटलतिर लाग्छु । झोलामा रातो खाम छ । खाममा के छ अब भने मलाई थाहा छ !
भोलिपल्ट मेरो अघि लाग्छन् आमोद राई । अर्का मास्टर । बडो बाचाल । ती मलाई हङकङको न्याचुरल हिस्ट्री म्युजियममा लान्छन् । त्यो विरल र भव्य म्युजियमले हाराहारी दुईवटा कथा हाल्दो रहेछ । एउटा, हङकङको प्राकृतिक उत्पत्ति र विकासको कथा । अर्को, मानिस जातिको उत्पत्ति र हङकङको राजनीतिक विकासक्रमको कथा । कथा कथनका दुई औतार छन् । एउटा, म्युजियमका भित्ताभित्ताका स्थिर चित्रहरूमा कथा भनिन्छ । अर्को, कथा भनिन्छ गतिमान भिडियोमा । जे हेर्‍यो, त्यसैत्यसै अभिभूत भइने । लोमहर्षक भौगर्भिक उथलपुथल, उत्पाती भूकम्प र ज्वालामुखी, बबाल विस्फोटकारी मेघ र छहरे वर्षा, प्रलयकारी आँधी र लोहोरे असिना, विकराल बाढी र पहिरोको चक्रपछि चक्र पार गर्दै प्रकृतिको गर्भबाट आँखैअगाडि हङकङको जायजन्म हुन्छ । बज्र समाजको चट्टानको ढ्याके ढिकोमाथि हङकङ ट्याक्क खडा हुन्छ, जो सदैव भूकम्पमुक्त छ । चित्रमा र भिडियोमा देख्न पाइने नरबाट वानरमा विकासको कथा झनै रोमाञ्चक लाग्छ । हङकङको नेपथ्यमा महाचीन छ । दृश्यावलीमा बाह्य अतिक्रमण र युद्ध, प्रभुत्व र प्रतिरोध, दासता र विद्रोहका चक्रपछि चक्र पार गर्दै अध्यक्ष माओको क्रान्तिकारी कमान्डमा आधुनिक चीन जन्मिन्छ । र, सँगसँगै जन्मिन्छ हङकङ पनि । त्यो हङकङ जो ब्रिटिस राजको हैकममा सय वर्ष बिताएर अहिले फेरि पूर्वस्वामी चीनको पोल्टामा परेको छ ।
मेरो हङकङ म्युजियम घुमाइमा एउटा अद्भुत रहस्य घटित भयो । भयो के भने, नित्सेले वध गरेको ईश्वरको प्रेतले रहस्यमय ढंगले मेरो पिछा गर्‍यो । म एक सुरले दृश्यहरू हेर्दै के थिएँ, दाहिने पिँडुलामा केही चीजले छ्यास्स स्पर्श गरेको आभास भयो । काउकुती लगाउन खोजेजस्तो, चिमोट्ला कि जस्तो । यसो हेरेँ, केही देखिनँ । फेरि पिँडुलामा बिरालोझैँ केही लुटपुटियो । फेरि हेरेँ, केही छैन । दिमागमा मिलिक्क बिजुली चम्क्यो र मलाई बोध भयो, त्यो अदृश्य र निराकार जिनिस पक्कै ईश्वरको प्रेत हो ! यता गोर्खे राजनीतिमा पूर्वमौसुफ ज्ञानेन्द्र र निजका पवनपुत्र कमल थापा शिरमा राजतन्त्रको प्रेत बोकेर मलाई तर्साउँदै थिए, उता हङकङमा ईश्वरको प्रेत मलाई तर्साउन थाल्यो । अहो, मलाई प्रेतपछि प्रेतको यो कष्टकर आखेट ! प्रकृति र मानिसको उत्पत्तिको यो भौतिक कथा ईश्वरको अस्तित्व र उसको सृष्टिको मिथकका लागि बडो खतरा थियो । त्यसैले त ईश्वरको पिराहा प्रेत मलाई तर्साउन, मेरो नूर गिराउन, मेरो मुख थुन्न र आफ्नो मौलिक औतारको पुनरोत्थान गराउन बित्थामा यत्नशील हुँदो हो । त्यसरी नै जसरी हाम्रा ज्ञानेन्द्र बाउसाहेब र निजका पयरपोशतुल्य कमलबाबु मृत राजतन्त्रलाई इतिहासको मसानघाटबाट ब्युँझाएर लोकमाथि निरंकुशता थोपर्न गाभिनो भैँसीझैँ बित्थामा कनिरहेका छन् । म्युजियम घुमाइ र बहुबिध दृश्यावलीको दर्शनभरि नै ईश्वरको प्रेतले घरी कता र घरी कता स्पर्शको अत्यासकारी आभास दिँदै मलाई सताइरह्यो । जब म आगोका आविष्कारक प्रात:स्मरणीय बाजे–बज्यैका समीपमा पुगेँ, ईश्वरको प्रेत अताल्लियो । र, ईश्वरनिर्माता मानवद्वारा आविष्कृत आगोको डरले थुरथुर काम्दै त्यसले कतै शून्यमा शून्यसरी विलीन हुन कुलेलम ठोक्यो ।
हङकङ म्युजियममा ईश्वरको तनावकारी प्रेतले हरेस खायो, विज्ञानको प्रबोधनकारी आलोकको शिर ठाडो भयो ।
हङकङ म्युजियममा मेरालागि खास गरेर दुई कुरा बिर्सिनसक्नु हुनगए । ज्ञानको सिकार गर्न शैक्षिक भ्रमणमा निस्केका निश्छल बालबालिकाहरू । र, आगोको जीवनदायी आविष्करलाई सरल र दिगो बनाउन चिन्तनशील र प्रयोगशील हाम्रा परापुर्खाहरू । म्युजियमको एक एकान्त कुनामा आठ–दस जना आठ–दस वर्षका बालबालिका हात–हातमा कलम–कापी लिएर बसेका छन् । ती आफूले अवलोकन गरेका अनेक कुरा टिपोट गर्दै छन् । तिनकी ममतामयी गुरुआमा तिनलाई चिनियाँ भाषामा यसो गर, उसो गर नानी–बाबु हो भनेर सघाउँदै र हौस्याउँदै छिन् । आनन्दित र उत्साहित नानी–बाबुहरू आफ्नो कर्ममा दत्तचित्त छन् । तिनले करिबन तीन घण्टामा प्रकृतिको अर्बाैँ वर्षको विकासको कथा र मानिसको करोडौँ वर्षको विकासको यात्रा सदृश्य र सचित्र हेर्न पाएका छन् । त्यो म्युजियम तिनका लागि जीवन्त, रोमाञ्चक र आह्लादकारी प्रयोगात्मक पाठशाला बनेको छ । लाग्छ, दशकौँको शिक्षाबाट पनि मूत्र्तरूपले आर्जन गर्न नसकिने ज्ञान हाम्रा नानी–बाबुहरूले यस्ता म्युजियमहरूबाट एकाध घण्टामै आर्जन गर्न सक्छन् । यसमा खाँचो एउटै कुराको छ— नानी–बाबुहरूका गुरु–गुरुआमा ज्ञानवान, धैर्यवान र ममतामयी हुनु जरुरी छ ।
अब अर्को दृश्यमा छन् हाम्रा ओडारवासी आदिम पुर्खा । जसोतसो लाज छोपेका एक जना चुल्ठे बाजे र एक जना चुल्ठे बज्यै । ती बडो गम्दारी मुद्रामा, एक चित्तले आगोको आविष्कारलाई सरल र दिगो बनाउने जुक्ति रच्दै छन् । त्यो जुक्ति वास्तवमा आदिम प्रविधि र संस्कृतिको भ्रूण हो र हो त्यो मानव सभ्यताको आधारशिला पनि । हामी जे र जस्ता छौँ, हामीलाई यस्ता बन्ने गेरेटोको रेखी कोरिदिने तिनै आदिम मानव हुन् । तिनै प्रिय बाजे र तिनै प्रिय बज्यै । म ती जीवनदायी बाजे–बज्यैलाई असीम श्रद्धाभावले अपलक हेरेर नतमस्तक भई तिनलाई अभिवादन गर्दै म हङकङ म्युजियमबाट बिदा हुन्छु ।
यो अन्तरिम कालमा म दुई थान अभिनन्दन ग्रहण गर्छु । तेस्रो र समापन अभिनन्दन । एउटा हङकङे एनआरएनको, अर्को हङकङे नेपाली महासंघको । एनआरएनकी अध्यक्ष रहिछन् राधिका गुरुङ, महासंघकी अध्यक्ष रीता गुरुङ । यी दुई सोल्टिनी मुस्कानमय मुद्रामा मलाई खादा, खाम र वस्त्र प्रदान गर्छन् । यो अर्पण गर्नु र ग्रहण गर्नुको आकस्मिक कथा एक अमिट सम्झना भएर हाम्रा हृदयमा छापिन्छ ।
आखिरमा आयो कुरा अब एक थान अजीव निम्तालुको । जातले बाहुन, कर्मले जनजातीय पहिचानका अग्निवर्षी अभियन्ता, थातथलो र खेलोफड्को नेपालको पूर्वी भेगमा । आफ्नो हकप्राप्तिको अभियानमा हाक्काहाक्की खडा भइदिने इतर जातका दुर्लभ र दृढ योद्धा ठानेर होला, हङकङवासी जनजातिगणले निज बाहुन–बाजेलाई सप्रेम निम्ता गरी पठाए । ती निम्तालु जीवात् सहर्ष हङकङ गए । तिनले सदाझैँ आकाश–पाताल हल्लाउँदै आवेगमय भाषण ठोके । तिनले अभिनन्दन ग्रहण गरे । ती घुमे, तिनले पहिचानको वृत्त विस्तार गरे, ती खुब रमाए । यहाँसम्म सबै कुरा ठीकठाक थियो । तर, अब सुरु भएछ कथाको ननिको प्रकरण, निजको आचारजन्य विचलन र नैतिक स्खलन । आखिर निजहजुरबाट त्यस्तो अर्घेल्याइँ के हुनगयो, लुङा ? एक जना घरबेटी लुङालाई म सोध्छु । प्रत्युत्तरमा नाक खुम्च्याउँदै लुङा भन्छन्— घरघरै गएर, जाँड खाएर... । किञ्चित् विनोदी लबजमा म ठट्टा गर्छु— बाहुनका छोराले जनजातिका घरमा जाँड खायो त के बिरायो ? जनजातीय सनातनी संस्कृतिको इज्जत बढ्यो, बाहुनको स्वाँगे शुद्धता किञ्चित् गिर्‍यो । राम्रै त भो ! तलको अलि माथि उठ्यो, माथिको अलि तल झर्‍यो । संस्कृतिमा असमानहरूमाझ समानताको धरातल निर्माण हुने यसरी नै त हो । अँ, होला... मित्र मुख बिगार्दै चित्तको तीतो पोख्छन् । तर, ती मरिगए कथाको गुह्य खोल्दैनन् ।
हैट्, मान्छे खत्तम रहेछ, अर्का एक भुक्तभोगीको मुखबाट म सुन्छु । किन खत्तम, मान्यवर ? कसरी खत्तम ? केमा खत्तम ? आखिर घरबेटीको अपेक्षा के थियो र अतिथिको अन्तरबाट त्यस्तो अनपेक्षित के उजागर भयो ? म जब्बर खुल्दुली प्रकट गर्छु । अहँ, प्वाक्क मुख फोरेर कोही केही भन्दैन । र, कुराको तत्त्व रहस्यको कुइरोमा मडारिन्छ ।
पछि, काठमाडौँमा हङकङबारे जान्नेसुन्ने एक जना मित्र कसैलाई नभन्ने सर्तमा मेरा कानमा सुटुक्क भन्छन्— सुन, नभनिएको र भन्नु नहुने कुरो यसो हो । कसो ? हङकङवासी नेपालीहरूको उदारताबाट ती मनुवाले अनुचित लाभ लिन खोजे । आखिर तिनले गरे के ? अहो, तिनले के मात्र गरेनन् ? तिनले ङिच्च हाँस्दै हात पसारे । तिनले याचक मुद्रामा मुख फोरे । आखिर तिनले मागे के त ? घरबेटीसँग तिनले आइफोन मागे । तिनले आइप्याड मागे । तिनले ल्यापटप मागे । सकेछन् त लौ ! मैले जिब्रो टोकेँ । उनले मुख छोपे ।
यी दीनदु:खी याचक मैले आक्कल–झुक्कल नाम सुनेका मनुवा हुन् । यिनको थर खनाल, धिताल, बस्याल, बराल, दाहाल, बडाल यस्तै केही हो । यिनका थरको अन्तिम अक्षर ‘ल’ हो, त्यो म सम्झन्छु । तर, ठ्याक्कै के ‘ल’ हो त्योचाहिँ अहिले मैले बिर्सेँ ।
मलाई लाग्छ, जे वा जो सम्झिन लायकको छैन, त्यो बिर्सिइनु नजाती कुरा किमार्थ होइन ।
अमेरिकी बाख्रागोठमा दिदी पीके चौधरी
प्रजातन्त्र र फुटपाथ
गहन विषय, छिपछिपे लेखाइ
दोस्रो हाफमा पंकज